'Kan filatame ADWUI malee Badhaadhina miti', Dr. Salamoon Kidaanee - BBC News Afaan Oromoo
'Kan filatame ADWUI malee Badhaadhina miti', Dr. Salamoon Kidaanee
Image copyright PP/TPLF
Muudamni MM Abiy Ahmad miseensa Koree hoji-raawwachiiftuu TPLF Aadde Fatilawarq Gabrahigizihaabeer aangoo irraa kaasuun nama biraan bakka buusan kan seera cabsedha jedhe TPLF.
TPLF muudamniifi aangoorraa kaasuun kun kan seera cabsedha jechuun yeroo mormu, Paartiin Badhaadhinaa ammoo muuduufi kaasuun kan kanumaan durallee baramedha jedheera.
Aadde Fatilawarq malee aanga'oota TPLF keessaa Kantiibaan Itti-aanaafi Itti-gaafatamaan Biiroo Geejjibaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Dr. Solomoon Kidaanee akka aangoorraa ka'an xalayaan isaan qaqqabuu BBC'f mirkaneessaniiru.
TPLF ibsa isaa kanaan motummaan Federaalaa hattattamaan tarkaanfii sirreefamaa akka fudhatu gaafate
TPLF gocha seera malee miseensoota kiyya aangoowwan Federaalaafi Magaalaa Finfinnee irraa ari'ate hattattamaan yoo sirreesse malee kana hordofee waan uumamuuf itti -gaafatamuummaan kan motummaa Federaalaati jechuun akeekachisee ture.
TPLF ibsa baase kanaan akka jedhetti, garaa garummaan yaadaafi toraa ADWUI fi TPLF jidduutti dhiheenya keessa umamee bal'achaa adeemuun paartii haaraan hanga hundeeffamu irra gahamuu ibseera.
Haata'u malee,TPLF adeemsa kana yeroo adda addaatti akka sirraa'uufi haalawwan dursi itti kennamuu qaban kan biraan jiraachuu yaada dhiyeessulleen fudhatama dhabuu hima ibsichi.
Haata'u malee, aanga'oonni yaada kana dhagahuufillee fedhii hin qabne haala farra-dimokraasii ta'een ADWUI diiguun paartii haaraa kan ummanni hin filannee aangoo qabachuun akka itti fufuu taasiseera jedha.
Sadarkaa paartiitti kallattiin qabannee garaagara haata'u malee itti-gaafatamummaafi mirgoota federaalaafi motummaa naannoo heera biyyattiin kaa'ame kabajuun kan adeemnu ta'u ifatti beksiifneera jechuun eera ibsi TPLF kun.
Ummanni Itoophiyaa kan filate dhaabbata ADWUI'ti kan jedhu ibsichi, akka hooggananiifi akka mootummaa hundeessaniif aangoon kan kennamees dhaabbileedhuma kanneeniif ture jedha.
"Kanaan alatti paartii haaraan aangoo akka qabatuufi biyya akka bulchu taasisuun, aangoo ummataa seeraan ala fudhachuufi heera mootummaa dhiitudha," jedheera ibsichi.
Wayita ammaattis miseensoota gaggeessitoota TPLF waan ta'an qofaadhaaf itti-gaafatamummaa sadarkaa motummaa Federaalaafi Magaalaa Finfinnee irraa akka ka'an taasifamuun isaanii gonkumaa fudhatama hinqabu jedheera.
Gochi kanaan duraafi ammas raawwatame kun sirreeffamuun irra jiraataa, ta'uu yoo baatee garuu kanaan wal qabatee waan uumamuu danda'uuf itti-gaafatamummaa kan fudhatu qaama gocha seeraan alaa kana raawwatan ta'uun ifa ta'u qaba jechuu akeekachiseera.
Paartiin Badhaadhinaa gama isaatiin kan gaggeeffame akkuma kanaan duraa aanga'oota muuduufi angoorraa kaasuu baratamedha malee waan haaraa miti jechuun deebii kenneera.
Dr. Salamoon Kidaanee akka jedhanitti dabballoonniifi hoji-gaggeessitoonni TPLF Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee keessa sadarkaa adda addaa irra jiran Waajira Ministeera Muummeetiin akka aangoorraa kaafaman taasifamuudhaan miseensota warra hin taaneen bakka buufamaa jiru.
"Finfinnee keessatti akka ADWUItti kan dorgomne. Hanga ADWUIn mo'atee turetti TPLF harka dhibba keessaa 25 bakka qabaata. Aangoo bulchuu walqixa qaba.
Hojimaata kana diiguu jechuun caasaa bulchiinsa magaalichaa diiguu jechuudha," jechuun tarkaanfichi seeraafi sirna hojii kan cabsedha jedhu.
Waggoota 28 darban aangoorra kan ture ADWUIn yeroo gara Paartii Badhaadhinaatti jijjiiramutti maqaa isaa qofaa osoo hin taane ilaalcha Warraaqsa Dimokiraasii ittiin bulaa ture gara yaada Ida'amuutti jijjiirrateera.
Adeemsa kana keessatti TPLF seeraan aladha jechuudhaan Paartii Badhaadhinaatti akka hin makamne beeksisuun isaa walqeequu mootummaa Federalaafi kan naannoo Tigiraay gidduu jiru daran hammeesseera.
Tarkaanfiin miseensota TPLF aangoo mootummaa Federaalaafi Bulchiinsa Magaalaa Finfinneerra jiran irraa kaasunis bu'aa walqeequu kanaati jedhu Dr. Salamoon.
Mootummaan tarkaanfii kana osoo hin fudhatiin dura TPLF'n mariyachuun isarra ture jechuun dubbatu.
"Kun aangoo siyaasaati. Ummanni TPLF fi sagantaa isaati kan filate. Namoota TPLFn bakka bu'an kan dhiyeeffachuun irra jiraatu TPLF qofa.
Maqaa dhalataa Tigiraay jedhuun bakka buusuun hin danda'amu. Adeemsi kun seeraan aladha. Ga'ee sabummaan akka kennuu fakkeessan," jedhu.
"TPLF ummatan filatamee malee dhaaba kadhatee dhufe miti. TPLF Paartii Badhaadhinaa waliin walitti hin makamu jedheef qofa namoota ummata Tigiraayiin filataman adda baasuun aangoo isaaniirraa kaasuun sagalee ummataa hatuudha jechuun falmu Dr. Salamoon.
"Kan filatame ADWUI malee Badhaadhina miti," jechuudhaanis akka falman dubbatu.
Mootummaa Federaafi naannoo Tigiraay gidduutti walqeequun osoo jiruu aanga'oonni ol-aanoo akkamiin aangoo mootummaa Federaalaa qabatanii itti fufu? jechuun gaaffii dhiyaateef Dr. Salamoon yeroo deebii kennan, "Gara siyaasa paartii daneessa ta'eetti deemuuf jirra jedhamaa jira mitii? TPLF kan kan waliin hojjetaa ture aangoo seera qabeessa waan qabuufidha.
Hojii mootummaa waliin hojjechuun ni danda'ama, hojjetamaas jira jedheen amana. Garaa garummaan jiru kan siyaasaati malee kan waliin akka hin hojjenne taasisu miti," jedhan.
Dimokiraasii Warraaqasaatti kan amantan yoo taataniifi falaasama Ida'amuu kan hin fudhanne yoo taatan akkamiin waliin itti fufuu dandeessu gaaffii jedhuufis deebii kennaniiru Dr. Salamoon.
"Sagantaa isa haaraa mootummaan hin beeku, hin filannes. Ummanni kan filate isa duraati. Kanaaf, gaaffiin ka'uu qabu ummanni sagantaa Badhaadhinaatiin buluu danda'aa kan jedhu ta'uu qaba."
Akka Dr. Salamoon jedhutti jijjiirama jiruun walqabateellee sagantaafi toorri ADWUI dhiifamee osoo kallattiin biraa filatames, sadarkaa Federaalattis ta'e magaalaa Finfinneetti aanga'oonni TPLF jiran aangoo seera qabeessa ummanni keneef qabatanii waan jiraniif ummatichi sagalee isaatiin hanga kaasutti aangoo isaanii qabatanii itti fufuu qabu.
Dirree qabsoo ta'uus qaba.
Muuduufi muudamarraa kaasuun bu'uura seeraatiin?
Ogeessa seeraafi Heera mootummaa kan ta'an Obbo Misgaanaawu Mulugeetaa Addi mootummaan aangoorra jiru hundeeffatee ture diigamuu akka danda'uufi paartiin sagalee caalaa qabu aangoo qabatee akka itti fufuu danda'u seerri tumamee jiraachuu dubbatu.
Kun biyyoota biroottis kan baratame akka ta'e dubbatu.
Haata'u malee, muuxannoo biyyoota biroorraan karaa adda ta'een kan Itoophiyaa keessatti ta'e garuu Addichi (Gamtaan) paartileen uummatan kun diigamuu qofaa osoo hin taane miseensonni paartileen Addicha uumanillee diigamuu isaniiti jechuun ibsu.
"Adeemsa Heera mootummaa kana deggaru jiraachuun irra jira. Miseensonni paarlaamaa miseensa Paartii Badhaadhinaa haaraa kana ta'anii itti fufuu akka barbaadan gaafatamuu qabu.
Lakkoofsi isaanii kan baayyateefi ol-aantummaa kan qaban yoo ta'e rakkoo hin qabu. Osoo akka kanaa ta'ee jiraate yoo xiqqaate adeemsa Heera mootummaa kan guutudha jedhama," jedhu.
"Kanumallee taanaan hayyoonni siyaasaa ni qeequ. Paartii haaraa ta'ee sagantaa siyaasaa haaraatiin ittin fufa yoo jedhe gaaffiin fudhatama qabaachuu irratti ka'uu danda'a. Haata'ullee malee, adeemsa seeraallee guuteera jedhama".
Seera filannoo isa haaraa eeruudhaan miseensonni paarlaamaa akka dhuunfaattis ta'e akka mormituutti itti fufuu akka danda'an ibsu Obbo Misgaanaawu.
Haala kanaan teessoo paarlaamaa 547 jiru keessaa hanga kamitu itti fufuu akka barbaaduufi itti fufuu akka hin barbaanne Paarlaamichi ifa taasisuun irraa eegama ture jedhan.
"Muudamni parlaamaa hedduu na hin ajaa'ibu. Ministira tokko muudama irraa kaasuun hojii ministira muummee waan ta'eef sana gochuu dhiisuuf hin dirqisiifamu jedhu.
Haata'u malee, ministirri haraan yeroo muudamu paarlaamaaf dhiyaatee mirkaneeffamuu akka qabuufi kun ammoo ta'aa akka hin jirre ibsan. Paartiin Badhaadhinaa yoo xiqqaate ol-aantummaa seeraa kabachuudhaaf adeemsa kana hordofuun raawwachuun akka isarra ture himan.
"Kun adeemsa salphaa ta'e fakkaatee mul'achuu danda'a. Akka ilaalcha ol-aantummaa seeraatiin garuu waan bu'uura ta'edha. Sababiin isaas, ol-aantummaan seeraa suuta suutaan diigamaa kan deemu adeemsa seeraa akkasii kana cabsuudhaan yeroo jalqabdudha," jedhu.